Jilibyada qalinka ee jilicsan ee PVC
SJJ Waxay Bixisaa Ballaadhi Ballaadhan oo Bilado Gaar ah
Lacagta qadiimiga ah oo sidoo kale loogu magac daray qadaadiicda taraafigga, ayaa loo adeegsadaa beddelidda qadaadiicda dhabta ah ee dukaanka weyn, sanduuqa jimicsiga ama meelaha kale, gaar ahaan waddamada Yurub iyo suuqa Mareykanka. Cabbirro & dhumucyo kala duwan ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo qadaadiicda waddanka oo ay ku jiraan Euro, Jarmal, Faransiis, Du ...
Ma waxaad u raadineysaa wax dalacaad ah ama hadiyado qurux badan gabdhaha ama marwooyinka? Mid ka mid ah hadiyadahayaga xiisaha leh - muraayadaha akril -ka & muraayadaha qurxinta biraha ayaa kuu noqon lahaa ikhtiyaar wanaagsan. Muraayadda jeebka ee qurxoon oo qurxoon waxaa lagu samayn karaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta, zinc al ...
Waxaa laga yaabaa inaad ogaato inuu xagaaga sii kululaanayo & qabowga, qabowga & qabowga xilliga jiilaalka. Ilaalinta deegaanku waxay noqonaysaa lama huraan. Iyaga oo ay la socdaan dadka codsanaya ilaalinta deegaanka oo ka sarreeya & ka sarreeya, si waafaqsan, waxyaabaha laga yaabo in noole -kobcin karaan waa isbeddel. Marka laga reebo ...
Cloisonné Classic Lapel Pin & Badge
Calaamadda Cloisonné waxaa sidoo kale loo yaqaannaa sumadda dhaldhalaalka adag, taas oo ah hab dhaqameed aad u badan oo leh taariikh dheer. Waxaa la yiri baajiyaha dhaldhalaalka adag waxaa la ilaalin karaa 100 sano iyada oo aan baaba'ayn maxaa yeelay midabada waxaa laga soo saaray macdanta macdanta waxaana lagu gubay 850 digrii centigrade. Waxaan u isticmaalnaa e ...